‘निस्वार्थ प्रेमको कथा हो बितेका पल’ – निर्माता कृष रिजाल - Glamour Nepal
‘निस्वार्थ प्रेमको कथा हो बितेका पल’ – निर्माता कृष रिजाल
कृष रिजाल, आगामी पौष २६ गते प्रदर्शन हुने चलचित्र ‘बितेका पल’का लगानीकर्ता हुन। झापाको काँकडभिट्टामा जन्मिएका रिजाल पढाईको क्रममा अमेरिका पुगेका थिए र अहिले त्यहीको नागरिकता लिइसकेका छन्। अमेरिकाका विभिन्न संघसस्थामार्फत सामाजिक सेवामा सक्रिय रिजाल आफ्नो फिल्म सफल हुनेमा आशावादी छन्। उनले फिल्मको औपचारिक अध्ययन पनि गरेका छन्। प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको अनलाइन संवादको सम्पादीत अंश:
# ‘बितेका पल’मा लगानी गर्न संयोग कहाँबाट जुर्‍यो ?
– म वासिङटन कलेजमा फिल्म मेकिङको क्लास लिइरहेको थिएँ। त्यहि बेला एउटा सन्दर्भमा राजेश दाई -निमर्ाता राजेश घतानी)ले मलाई यो फिल्मको स्त्रिmप्ट सुनाउनु भयो। असाध्यै मन छोयो र लगानी गर्न तयार भएँ।
# पछिल्लो समय निर्माण भएका अधिकांश चलचित्रले निर्माताको गोजीमात्र रित्ताएका छन। अमेरिकामा बसेपनि यो स्थितीबाट पक्का बेखर हुनुहुन्न। तैपनी ‘बितेका पल’मा लगानी गरेर किन जोखिम मोल्नुभयो ?
– म मेरो देशलाई निकै माया गर्छु र त्यो देशको फिल्म उद्योगको एउटा भाग हुने मेरो पहिल्यैदेखिको इच्छा थियो । त्यसैले अमेरिकामा बसेर पनि फिल्ममा लगानी गरें। मलाई थाहा छ, नेपालमा फिल्मको त्यति ठूलो मार्केट छैन। अधिकांश फिल्मको लगानी उठेको छैन। तर यो जान्दा-जान्दै पनि मैले लगानी गरेको छु। मलाई आशा छ, ‘बितेका पल’ले नेपाली सिनेमाको व्यापारमा निकै उत्साह जगाउनेछ। फेरि जहाँ राम्रो छ, त्यहाँ मात्र लगानी गर्न थालियो भने नराम्रो क्षेत्र कहिले राम्रो हुँदैछ। त्यसैले सकेसम्म राम्रो फिल्ममा लगानी गरेर हामीले सिने क्षेत्रलाई माथि उकास्नु पर्छ। मेरो प्रयास यहि हो। दर्शकले बुझिदिनु भयो भने मेरो लगानी खेर जाँदैन।
# भनेपछि अमेरिकामा बसेर नेपाली फिल्मको मार्केट विस्तार गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ ? अमेरिकामा नेपाली फिल्मको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ?
– हो, अहिले पनि म विभिन्न संघसस्थामा रहेर नेपाली फिल्मको अमेरिकामा बजार प्रवर्द्धनमा लागेको छु । अहिलेसम्म निकै सकारात्मक संकेतहरु पाएको छु । अमेरिकामा बस्ने सबै नेपालीहरु आफ्नो देशको फिल्मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्छ । जसबाट मलाई थप हाैसला मिलेको छ । त्यसैले एक दिन नेपाली फिल्म उद्योगलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने मेरो लक्ष्य छ । यसको लागि अहिलेदेखि नै गृहकार्यमा जुटिरहेको छु ।
# ‘बितेका पल’ कस्तो खालको फिल्म हो ? केही बताइदिनुस् न ।
-यो हाम्रै समाजको सत्य कथामा आधारित चलचित्र हो। अनि त्यो कथामै मनोरञ्जन र सन्देश दुवै दिने प्रयास गरेका छौं। मलाई लाग्छ, एउटा स्तरिय फिल्ममा चाहिने गुणहरु यिनै हुन्। आफ्नो कथा, जहाँ मनोरञ्जन र सन्देश दुवै हुन्छ। त्यसैले पनि फिल्मले दर्शकको मन जित्नेमा हामी विश्वस्त छौं।
# दर्शकले हेर्नै पर्ने त्यस्तो विशेष गुण के छ फिल्ममा ?
– आजकल माया एक झर पानी जस्तो भएको छ। आउँछ, जान्छ। कसैलाई सम्झना हुँदैन तर यो फिल्मले अझ पनि हाम्रो समाजमा रोमियो-जुलियटको जस्तो चोखो र निस्वार्थी माया छ भन्ने देखाउँछ। अनि एउटा निस्वार्थ भावको प्रेम कथा कसलाई मन नपर्ला र ?
# तपाईको फिल्म रिलिज भएकै दिन चर्चित हास्यकलाकारहरुद्वारा अभिनित ‘छ एकान छ’ पनि रिलिज हुँदैछ। यसले तपाईको फिल्मको व्यापारमा ठूलो धक्का देला नि, हैन ?
– यो हाम्रो फिल्म उद्योगकै दुभाग्र्य हो। म अमेरिकामा छु, त्यसैले मैले गर्न सक्ने केही छैन। तैपनी भगवानसँग सबै फिल्मको सफलताको कामना गर्छु।
# रिलिजको बेला नेपाल आउनुहुन्छ ?
– यहाँ बसेर म नेपालमै रिलिज भएको दिन अमेरिका र क्यानडामा रिलिज गर्ने तारतम्य मिलाइरहेको छु। त्यसैले नेपाल जान पाउँदिन होला। जनावरी ११ मा यो फिल्म अमेरिका र क्यानडामा पनि रिलिज हुँदैछ।
# निर्देशक सुरज सुब्बा नाल्बोको कामप्रति कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
– सुरज दाई हाम्रो फिल्म उद्योगको सबैभन्दा क्षमतावान र स्त्रिmप्टलाई पर्दामा उतार्न सक्ने निर्देशक हो। उहाँसँग काम गर्न पाउँदा मलाई निकै गर्व महसुस भएको छ। उहाँको कामबाट म सतप्रतिशत सन्तुष्ट छु र, उहाँको कामले हामीलाई निराश तुलाउँदैन भन्नेमा ढुक्क छु।
# ‘बितेका पल’पछि अरु फिल्ममा लगानी गर्ने योजना छ कि छैन ?
– पक्का पनि गर्छु। तर स्क्रिप्ट राम्रो हुनुपर्‍यो।
# अन्त्यमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
– जसरी ‘बितेका पल’को प्रोमो र गीतहरु मन पराइ दिनु भएको छ। त्यसैगरी फिल्म पनि हलसम्म गएर हेरिदिनुहुन सम्पूर्ण दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुसँग अनुरोध गर्दछु।